Daawo Xisbiga Mukhtaar Roobow oo ka fal-celiyey warbixintii kasoo baxday guddiga QM | SMC
Home WARARKA MAANTA Daawo Xisbiga Mukhtaar Roobow oo ka fal-celiyey warbixintii kasoo baxday guddiga QM
Daawo Xisbiga Mukhtaar Roobow oo ka fal-celiyey warbixintii kasoo baxday guddiga QM
Xisbiga Amni iyo Cadaalad ayaa Maanta Magaalada Baydhabo ku qabtay kulan lagu dalbanayay in uu Cadaalad helo Hogaamiyaha Xisbiga Shiekh Mukhtaar Roobow Cali, iyo dadkii lagu Xasuuqay Baydhabo.
Dhanka kale kulanka ayaa lagu soo dhaweeyay warbixintii Qaramada Midooobey ee baaristii Xasuuqii ka dhacay Magaalada Baydhabo 13-Dec-2018.
Qoraalka kasoo baxay todobaadkan waxaa lagu xusay in doorashada Koonfur Galabed ay saameeyeen qalalaaso iyo laaluush lagu iibsaday xildhibaannada
Maanta oo Khamiis ah waxaa magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay lagu qabtay kulan ujeedkiisu ahaa taageerista warbixintaan iyo sidii xoriyadiisa u heli lahaa Sheikh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur oo u xiran Dowladda Federaalka Somalia.
Waxaa lagu sheegay kulankaan in marnaba la iloowi doonin sida ay warka u dhigeen xubnihii isugu yimid kulankan dadkii lagu dillay magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, walina ay magaalada ka jirto caburin .
Si kastaba kulankan oo uu soo abaabulay xisbiga Amni iyo Cadaalad ayaa lagu dalbay in Dowladda Federaalka xoriyadiisa ay u soo celiso Hogaamiyaha Xisbigaas.
Halkaan ka akhriso War murtiyeed kasoo baxay Xisbiga
Previous articleMaamulka Jubbaland oo dacwad u gudbiyey QM
Next articleDaawo XOG Milkiilaha dowlada oo la ogaaday qaabka lacagta Oga soo qaado dowlada Qatar iyo waxa usheego